ESI JIKỌỌ ỤGBỌALA SSD NA KỌMPUTA - SSD - 2019
Ịmụta ijikọ ụgbọala gị onwe gị
Ya mere, ịzụtala ụgbọala siri ike na steeti ugbu a ọrụ bụ ijikọ ya na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ. Nke mbụ, anyị ga-ekwu banyere otu esi ejikọ ụgbọala ahụ na kọmputa, n'ihi na e nwere nuances dị iche iche, mgbe ahụ, anyị ga-aga na laptọọpụ.
Ijikọ SSD na kọmputa
Tupu ị jikọọ ụgbọala gị na kọmputa gị, ị kwesịrị ijide n'aka na ọ ka nwere ohere na loops dị mkpa maka ya. Ma ọ bụghị ya, ị ga-ekpochapụ ngwaọrụ ọ bụla - arụ ọrụ siri ike ma ọ bụ draịva (nke na-arụ ọrụ na interface SATA).
A ga-ejikọ ụgbọala ahụ n'ọtụtụ mpaghara:
Imeghe usoro usoro;
Na nke mbụ, ọ dịghị nsogbu ga-ebili. Naanị ịkwesịrị ịtọpụ bọtịnụ ma wepu mkpuchi n'akụkụ. Dabere na atụmatụ nke ikpe ahụ, ọ dị mkpa mgbe ụfọdụ iwepụ ma mkpuchi abụọ.
Maka ịnweta ike draịva na sistemụ usoro nwere ogige pụrụ iche. N'ọtụtụ ọnọdụ, ọ dị nso n'akụkụ ihu, ọ fọrọ nke nta ka ọ ghara ikwe ka ọ ghara ịhụ ya. Site nha, SSDs na-adịkarị obere karịa diski magnet. Ọ bụ ya mere na ha na-abịa mgbe ụfọdụ na ntanetị pụrụ iche nke na-enye gị ohere iji nweta SSD. Ọ bụrụ na ịnweghị ụdị nke a, ị nwere ike iwunye ya na oghere nke kaadị ma ọ bụ gbaghaa ngwọta kachasị mma iji dozie ụgbọala ahụ.
Ugbu a na - abata usoro siri ike - nke a bụ njikọ kpọmkwem nke disk na kọmputa. Iji mee ihe niile na-achọ ụfọdụ nlekọta. Nke bu eziokwu bu na na ubochi ugbua di iche iche enwere otutu uzo SATA nke di iche na nbudata data. Ma ọ bụrụ na ị jikọọ ụgbọala gị gaa na SATA ezighi ezi, ọ gaghị arụ ọrụ zuru oke.
Iji jiri ike zuru oke nke ngwa ngwa siri ike, ha ga-ejikọrọ na SATA III interface, nke nwere ike ịnye ọsọ ọsọ data nke 600 Mbps. Dị ka a na-achị, ndị njikọ dị otú ahụ (etiti) na-apụta ìhè na agba. Anyị na-achọta ụdị njikọ ahụ ma jikọọ ụgbọala anyị na ya.
Mgbe ahụ, ọ ka na-ejikọta ike na nke ahụ, SSD ga-adị njikere maka ojiji. Ọ bụrụ na ị jikọọ ngwaọrụ maka oge mbụ, mgbe ahụ ị gaghị atụ egwu ijikọ ya na ezighi ezi. Njikọ niile nwere isi pụrụ iche nke ga - ekwe ka ị tinye ya n'ụzọ ziri ezi.
SSD njikọ na laptọọpụ
Ịwụnye ngwa ngwa siri ike na laptọọpụ dị mfe karịa na kọmputa. N'ebe a, ọ na-esirikarị ike ịmepe mkpuchi nke laptọọpụ.
N'ọtụtụ ụdị, ọnụ ụzọ mbanye ike nwere mkpuchi nke aka ha, n'ihi ya ịkwesighi ịkwasa laptọọpụ ahụ kpamkpam.
Anyị na-achọta ogige ahụ achọrọ, gbanwee mkpọchi ma jiri nlezianya kwụpụ draịvụ ike ahụ ma tinye ya na SSD. Dị ka a na-achị, ebe a niile njikọta na-eguzosi ike, ya mere, iji kwụpụ ụgbọala ahụ, ọ dị mkpa ịkwaga ya n'otu akụkụ. Na ijikọta nke ọzọ, na-ebu ya na njikọta. Ọ bụrụ na ịchọrọ na enweghị ntinye disk ahụ, mgbe ahụ, ị ​​gaghị ejiri ike karịrị ike, ma eleghị anya ị ga-etinye ya na ezighi ezi.
Na njedebe, ịwụnye ụgbọala ahụ, ị ​​ga-edozi ya n'enweghị ihe ọ bụla, wee mechie ahụ laptọọpụ ahụ.
Ugbu a, na ntụziaka ndị a dị ntakịrị, ị nwere ike ịchọpụta otu esi ejikọta draịvụ ọ bụghị nanị na kọmputa, kamakwa na laptọọpụ. Dị ka ị pụrụ ịhụ, a na-eme nke a n'ụzọ dị nnọọ mfe, nke pụtara na ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ike ịwụnye ụgbọala siri ike.